La dhashay boqortooyada Ilaah | Apg29
In muwaadiniinta jannada waa wax la yaab leh.
Haa, sidaas darteed waxaa la dhalashada jannada ku jira. Waxa aan la iibsan karaa lacag. Waa sida dhalashada Roman Bawlos. Waxaad ka heli by dhalashada, dhalashada cusub iyada oo badbaado in Ciise.
Dadka intooda badan aad u jecel yihiin inay u yimaadaan boqortooyada jannada Ilaah. Laakiin ka fog oo dhan in ay fahmaan in waa mid mar kale dhalataan, in la badbaadiyey oo ay halkaas ka heli.
Waxaan doonayaa in aan taageero caddaynta doondoonaya dheedheer Kitaabka Quduuska ah, si gaar ah waa sabuur. 87: 3-4
"Waxyaalo ammaan badan ayaa lagaa sheegaa, Magaalada Ilaahay. Rahab iyo Baabuloon sidii aan ku xuso doono in qireen kuwo aan; Bal eeg, Falastiin, iyo Turos, iyo Kuush, iyo kuwa halkaasuu ku dhashay. "
Rahab iyo Baabuloon uu qirtay magaca Ilaah, oo Rabbiga ku ogaaday. All kuwa ku dhashay Siyoon.
Romans 10: 9-10 ayaa sheegay, "Waayo, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga iyo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa. Waayo, qalbiga oo rumaysadkiinnu waa xaqnimada iyo qirtaa afka badbaadi doonaa. "
Marka hal mara dhalashada cusub oo ay noqoto "khalqi cusub ee Ciise Masiix (2 Korintos. 5:17).
Sabuurka. 87: 5: "Haa, oo Siyoonna waxaa laga odhan doonaa, 'Midkan iyo in uu ku dhashay iyada. Iyo ugu sarreeya ayaa iyada dhisi doona. ' "
Aayadda 6: "Haa, markii Rabbigu qorayo dadka, ka dibna wuxuu ku tirisaan sidii:" Midkanu halkaasuu ku dhashay. ' "
In Falimaha Rasuullada. 22: 27-28 converses Col. Lusiyas iyo Paul wada. Colonel weydiiyo Paul:
"Bal ii sheeg, waxaad tahay nin reer Rooma ah?"
Paul jawaab, "Haa".
Markaas kornayl ka yiri:
"Waxaan leeyahay kacayso wadarta weyn oo lacag si ay u iibsadaan xorriyadda this."
"Waxaan, si kastaba ha ahaatee, hore u leedahay u dhashay."
In muwaadiniinta jannada waa wax la yaab leh. Marka hal mar dhashay aawadiis ayaa badbaadinu la kulmi doonaan diidniintayda dhulka. Mid ka mid ah ayaa dareensan in "Adduun, waxaan leeyahay wax aan guriga ma", sida uu sheegaayo in song duug ah. In song ah daliishaday dheeraad ah ayaa yidhi: "Maya, waxaan jeclahay waa in samada dalka."